बि.सं.२०७४ साल मङ्सीर १५ गते शुक्रवारको राशिफल
नेपाली मितिः वि.सं. २०७४ । नेपाल सं. ११३८ । योग सं. ३८ । मङ्सीर महिनाको १५ गते शुक्रवार ।
अँग्रजी मितिः ई.सं. २०१७ डिसेम्बर महिनाको ०१ तारिख ।
तथीः दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु मार्गशीर्ष शुक्लपक्षको त्रयोदशी तिथी ।
योगः वरियान योग, १५ः३४ बजे पछि परिध योग ।
नक्षत्रः अश्विनी नक्षत्र, १२ः२६ बजेपछि भरुणी नक्षत्र ।
करणः कौलव करण १५ः०२ बजेसम्म उपरान्त तैतिल करण ।
काठमाडौंमा सूर्योदयः ०६ः३८ बजे ।
राहुकालः१०ः३३ बजेपछि ११ः५२ बजेसम्म ।
मेष राशि हुनेहरुको लागि आज दिन अनुकूल रहेको छ । केही अबरोधको बाबजुतपनि व्यवसायबाट धनलाभ हुने एवं भौतिक सुख शान्ति र मानप्रतिष्ठा बृद्धि हुनेछ । रपनि अभिष्ट कार्यमा सफलताको लागि केही उपायको अवलम्बन गर्नु उचित हुनेछ । सामान्यतया कार्यक्षेत्रमा जिम्मेवारी थपिनसक्ने छ भने सामाजिक कार्यमा सरिक हुनपाइने छ । नयाँ कार्यमा लगानीको सम्भावना पनि देखिन्छ । आज यहाँलाई एक अंक, रातो रङ्गको प्रयोग फापकर हुनेछ भने माँ इन्द्रायणीको स्तुति तथा श्रद्धाभक्ति गर्नु फापकर हुनेछ ।
वृष राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन सामान्य कार्यलाई पनि बढीनै यत्न गरेरमात्रै सफलता पाउन सकिने खालको दिन रहेको छ । हतारमा र विना जरुरी फजुलका कार्यमा चेष्टा नगरेकै राम्रो हुनेछ । बुद्धिको भरपुर प्रयोग गरेर अनावश्यक रुपमा धनको क्षति हुने तथा पश्चातापमा पर्न सकिने सम्भावनालाई हटाउन कोसिस गर्नुपर्ला । तीर्थ गमन वा मान्यजनको दर्शनभेटको लागि यात्रा गर्नुले खर्चयोगको सदुपयोग हुनसक्ने छ । यहाँको लागि आज तीन अंक र पहेंलो रंगको प्रयोग हितकर हुनेछ भने माँ सन्तोषीको श्रद्धाभक्ति विशेष हितकर हुनेछ ।
मिथुन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन सामान्यतया आम्दानीकर छ । रपनि विशेष आर्थिक प्राप्तिमा केही अबरोध देखिएको छ । अन्य कमाइतर्फ बुद्धि फिराउँदा हुने आम्दानी पनि फुत्कने र पछुतो पर्नसक्ने छ । कुधनको चेष्टाप्रति आत्मसंयमको जरुरी देखिन्छ । अपेक्षा तथा आश्वासन गरेको तर्फबाट हुने उपलब्धि नहुँदा अल्लि खल्लो महसूस हुनसक्ने छ । तथापि सामान्यतया दैनिक कामकार्य एवं पेशागत व्यवसायिक गतिविधि चालुनै रहनेछ । आज यहाँले दुई अङ्क, सेतो रङ्गको उपयोग र इन्द्रायणी देवीको भक्ति आराधना गर्नाले ग्रहको बाधक दोष कम भई केही उपलब्धि हुनसक्नेछ ।
कर्कट राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन आत्मबल बढाउन र समयको सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा केही राम्रो अवसर प्राप्त हुनसक्ने देखिएको छ । धेरै हौंसिन भने अल्लि नहुने समय छ । बढी हौंसिदा बन्नै पर्ने काम नबन्न पनि सक्नेछ । सामान्यतया मानसम्मान बढ्ने तथा पदप्रतिष्ठा प्राप्ति हुनसक्ने ग्रहगोचर परेकोले राजनीति, समाजसेवा वा नोकरी आदिमा जिम्मेवारी थपिनसक्ने लक्षण छ । व्यापार व्यवसायबाट ठिकै लाभ गर्नसकिने छ भने उच्च आहोदाका व्यक्तित्त्वसँग भेटघाट हुनसकिने र आडभरोसाजन्य आश्वासन मिल्नसक्ने छ । यहाँलाई आज एक अंक, रातो रङ्ग शुभ रहने छ भने आज तपाईँले विद्वान एवं मान्यजनबाट आर्शिवाद लिनु हितकर हुनेछ ।
सिंह राशि हुनेहरुको लागि आज दिन कमजोरी खोज्नेहरु सक्रिय देखिने छन् । आफूभन्दा माथिल्लो निकायलाई सिकाय पुग्ने हुनाले कामक्षेत्रमा केही अपयश पनि व्यहोर्न पर्नसक्ने छ । केही असफल चक्रब्यूहको शिकार भइनसक्ने छ तर, आत्मबल नगिराइ दृढताको साथमा आफ्नो कर्तव्यबाट विचलन नभएमा अन्ततोगत्त्वा परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउनसकिने छ । धार्मिक चिन्तन र सदाचरणको अभ्यासले जयतर्फ लैजाने छ । व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि आकस्मिक लाभ हुनसक्ने छ । नौं अङ्क, पहेंलो रातो तथा सेतो रङ्गका वस्तुहरुको उपयोग आज यहाँको लागि फापसिद्ध हुनेछ भने गुरुजनको आर्शिवाद लिनु थप सफलताकर हुनेछ ।
वृश्चिक राशिहुने व्यक्तिहरुको लागिआजको दिन पुरुषार्थ बढ्ने कार्यक्षेत्रमा आएको अड्चन हटाउन प्रयत्न हुनेछ भने विपक्षिका उपर प्रतिकार गर्ने योजना पनि बन्नेछ तर, ग्रहले त्यति धेरै बल दिइसकेको छैन जसको कारणले आँट आएपनि काम फत्ते गर्न अल्लि गार्हो पर्नेछ । ससाना काम एवं व्यवसायमा उन्नती हुनेछ । र आम्दानी बढ्नसक्ने छ । शारीरिक आरोग्यता बढ्ने, अनुहारमा कान्ति बृद्धि हुनेछ । आज यहाँको लागि छ अङ्क, हरियो रङ्गको प्रयोग र बढी आँट गरेको काममा सफलता प्राप्त गर्न गुरु वा विद्वान मान्यजनको सेवा आराधना वा गाईको सेवा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
धनु राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन मध्यम रहेको छ । आत्मरतीको चाहना तथा बोलेर बाढो हुनखोज्ने मनोविज्ञान बढ्नाले अर्काबाट हुने मुल्याङ्कनमा तपाईँको कमजोरी फेला पर्नसक्ने छ । अर्काको निदिखोजीमा समय व्यतित हुने र आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्य अधुरो रहनसक्ने कुरालाई पनि ग्रहले देखाइरहेको छ । समयको सदुपयोग गर्न खोजेमा अध्ययनको पक्षमा भने फाइदा लिन सकिनेछ । ध्यानपूर्वक स्वकर्मक्षेत्रमा समय दिनाले दैनिकी कार्यबाट सामान्य लाभ गर्नसकिने छ । पाँच अंक, रातो रङ्गको प्रयोग यहाँको लागि शुभ हुनेछ भने माँ भुवनेश्वरीको श्रद्धाभक्ति गर्नु हितकर हुनेछ ।
कुम्भ राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन हुनलाई दिनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सकिने गोचर परेको छ । तथापि ज्ञानोन्माद्पूर्ण हौंस्याहट बढ्न गरी हुनपर्ने जति कार्यसफलता नहुने र कम उपलब्धिले चित्तबुझाउन पर्ने सम्भावना देखिन्छ । सावधानि र लगनशीलतापूर्वक आफ्नो पेशालाई निरन्तरता दिएमा व्यवसायले फट्को मार्ने र आर्थिक एवम् भौतिक कठिनाई कम गर्नसकिने छ । स्वजनको सहयोग र प्रसंशा मिल्नेछ । तीन अङ्क, हरियो रङ्गको प्रयोगको साथमा विशेष काममा आउने कष्ट एवम् कठिनाइको निवृतिको लागि गुरुवत् मान्यजनको मार्गदर्शन लिनु हितकर हुनेछ ।
मीन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन यद्यपि वाणीमा दोष लाग्नसक्ने, बोलिएको कुराको सुनवाई हुन कठिन पर्ने, मुल्याङ्कनमा ह्रास आउने हुनसक्ने छ । सञ्चित धनको अपव्यय हुनसक्ने पनि सम्भावना देखिएको छ । तथापि अदृष्यरुपमा गुरु एवं मान्यजनको आर्शिवाद तथा कृपा प्राप्त हुनेहुनाले अप्रत्यासित लाभ एवं उपलब्धि पनि मिल्नेछ । विपरित खानपानको संगतमा पर्नसकिने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिन्न ख्याल गर्नुहोला । सामाजिक कार्यमा संलग्न हुनपर्ने सम्भावना पनि रहेको छ । आज तपाईँको लागि कुमारी देवीको श्रद्धाभक्ति गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।